Kedu otu esi eme ka aro ndị dị mkpa dị na isiokwu iji melite Amazon SEO?
Ndị na-ere ahịa n'Ịntanet, bụ ndị malitere ịmalite azụmahịa ha na Amazon, kwesịrị ịma ọdịiche dị n'etiti àgwà ọchụchọ na Amazon na Google. Amazon dị iche iche na ndị ọzọ search engines n'ihi na ya dum ogo usoro dabere na mikpu ego Amazon. Ọzọkwa, a na-emepụta usoro nyocha a maka nchọpụta ngwaahịa. Ọ bụ ya mere ndị ọrụ ji yie ụdị ajụjụ ọchụchọ "product-centric" n'ime Amazon - nightclub furniture clearance. Ha maara na usoro Amazon ga-enye ha ihe kachasị mkpa maka nyocha ha ngwaahịa ha nwere ike ịzụta n'otu pịa. Ọ pụtara na ọ bụrụ na ị na-adabere na Google AdWords search olu data gị Amazon keyword aro, ọ bụ eleghi anya na ị ga-akada ihe ziri ezi isiokwu nhọrọ ga-melite search rankings maka ngwaahịa gị.
Ọ dị nnọọ irè iji mee nnyocha zuru ezu na ntinye aka na njedebe nke mgbasa ozi kachasị mma Amazon. Ndepụta nke ọchụchọ ọchụchọ dị elu ma dị elu ga-emetụta ahịa gị ozugbo ma melite ngwaahịa gị na Amazon SERP. Ọ bụ ya mere iwepụta oge iji mee ihe zuru ezu SEO isiokwu nyocha maka ngwaahịa gị ga-abụ nnọọ ihe bara uru maka akara ala gị.
Amazon SEO isiokwu aro maka ngwaahịa ọhụrụ
N'okpuru ala nke mgbasa ozi kachasị mma, ịchọrọ ịchọta ọtụtụ atụmatụ SEO dịka o kwere mee. Nkwenye ndị a kwesiri ka ha kwekọọ n'ajụjụ ọchụchọ nke ndị ahịa gị. Ọ bụrụ na ịgaghị eme nchọpụta isiokwu dị na nmalite nke mgbasa ozi njikarịcha, ngwaahịa gị agaghị egosipụta na nchọta ọchụchọ Amazon maka ajụjụ ọchụchọ ndị ahịa ahụ.
Mgbe ị nọ na nhazi mbụ nke nkwalite ngwaahịa gị, ịkwesịrị ileba anya na ọchụchọ ndị ahịa gị na-achọ ịkwado maka ya. Ị nwere ike ịgbaziri okwu ndị a ma megharịa ha maka ebumnuche gị..Ị nwere ike ime ya ma ọ bụ na enyemaka nke ihe nchọgharị nyocha ngwa ngwa dịka Amazon Keyword Tool, Semalt Amazon SEO, ma ọ bụ Sonar. Ihe niile ị chọrọ bụ idetuo na kpochapụ ASIN nke ngwaahịa onye na-asọmpi n'ime Nchọgharị ASIN chọọ mmanya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-enweta ndepụta nke isiokwu TOP nke ndị nkata gị niche na-eji.
Mgbe nke ahụ gasị, ịkwesịrị ịmepụta ọchụchọ ndị dị mkpa site na nchọta ọchụchọ ha iji chọpụta ụdị dị iche iche kachasị dị mma maka nkwalite ndepụta nke Amazon gị. Ọ bụ ụzọ dị irè iji tụgharịa gaa ndepụta nke okwu ọchụchọ dị mkpa maka ngwaahịa gị. Ihe nchoputa nke kachasi na-egosi nyocha onu ogugu acho maka isiokwu nke obula choputara. Ihe omuma a ga - enyere gi aka inweta ezi echiche nke okwu ndi kacha mkpa nke ichoro icho maka ihe omuma nke Amazon.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ilebara mkparịta ụka ogologo-tail anya dịka ha na-erughị asọmpi ma nwee ike inye gị ohere ọ bụla iji mee ka ị mara Amazon. Ọzọkwa, okwu ndị a nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke ntọghata na ọnụ ala-kwa-click ọnụego. Otu uru nke isiokwu ndị ogologo-tail bụ na ndị nyocha na-eji ha nyocha ịchọpụta ihe kpọmkwem. Ọ bụ ya mere site na gụnyere isiokwu dị mkpa na ogologo isiokwu dị na isiokwu gị, nkọwa na isi okwu, ị ga-adọta ọtụtụ okporo ụzọ ndị a gbanwere na ndepụta gị.
Gbalịa izere ihe ọ bụla dị na ntinye okwu dị ka akụ Amazon ma ọ bụ naanị ihe ịchọpụtara.